आज ब’न्द भएका बैंक भोलि खुल्छन कि खुल्दैनन् ? यस्तो छ पल्लो अपडेट – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आज ब’न्द भएका बैंक भोलि खुल्छन कि खुल्दैनन् ? यस्तो छ पल्लो अपडेट
काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलिदेखि बैंक सञ्चालनमा अ’वरोध नहुने गरी प्र’शासनसँग स’मन्वय गरेको जनाएको छ। उपत्यकामा बुधबार रातिदेखि नै नि’षेधाज्ञा जा’री गरेर सबै सेवा ठ’प्प भइरहँदा अत्यावश्यक सेवा प्र’वाहमा अ’वरोध नगर्ने भने पनि प्र’शासनले आज बैंकका कर्मचारीलाई कार्यालय जान रो’केको थियो। कर्मचारीलाई अ’वरोध भएपछि बैंकर संघले खुलेका बैंक पनि ब’न्द गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले यसमा स’मन्वय गरिसकेकोले अ’वरोध नदोहोरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कर्मचारीलाई प्रहरीको अ’वरोधपछि बैंक ब’न्द भएको बारे सूचना पाएलगत्तै प्र’शासनसँग छलफल गरेकोले भोलिदेखि सबै शाखा खुल्ने बताए।
उनले भने, ‘ड्यु’टीमा रहने प्रहरीलाई माथि भएको समन्वयको जानकारी प्र’वाह नहुँदा स’मस्या भयो, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सुल्झाएको छ।’ उनले आज उपत्यकाका सबै शाखा नखुलेका हुनसक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको सहजीकरणपछि सबै ब’न्द नभएको दा’बी गरे ।प्रहरीले बैंकको परिचयपत्र देखाए पनि अ’वरोध गरेपछि नेपाल बैं’कर संघले बैंकका मुख्यबाहेक शाखा कार्यालय न’खोल्ने नि’र्णय गरेको थियो। डा. भट्टले राष्ट्र बैंकले प्र’शासनसँग स’मन्वय गरेपछि बैंकर संघ आफ्नो निर्णयबाट पछि ह’टेको समेत दा’बी गरे। उनका अनुसार भोलिदेखि बैंकका शाखाहरु खुल्नेछन् भने प्रहरीले बैंकका कर्मचारीलाई कुनै अ’वरोध नगर्ने बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो दिनमात्रै सबै बैंकलाई न्यूनतम बैंकिङ सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिए पनि प्रहरीले कर्मचारीलाई अ’वरोध गरेको हो। एक हप्ता हुने नि’षेधाज्ञामा सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्किन पनि रो’केको छ। तर अत्यावश्यक सेवा प्र’वाह गर्ने कार्यालय सञ्चालन गर्न भने दिएको छ। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय सेवा अत्यावश्यक नै रहेको भन्दै प्र’शासनसँग छलफल गरेर सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले धेरै कर्मचारीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था नखुलाउने र धेरै शाखा पनि खुल्न नदिने तर न्यूनतम बैंक सेवा सुचारु गर्नू भनी ५ बुँदे स’र्कुलर जा’री गरेको थियो।
उसले विद्युतीय माध्यमबाट हुने का’रोबारको सुनिश्चितता प्रदान गरी आफ्ना ग्रहकलाई सम्भव भएसम्म विद्युतीय मा’ध्यमबाट का’रोबार गर्न, ए’टीएम मे’सिनहरुमा प’र्याप्त नगद राख्न र सोको नि’गरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अ’त्यावश्वक बस्तुको आ’पूर्ति सु’निश्चित गर्न ड्र’फ्ट, टी’टी, प्र’तीतपत्र, ग्या’रेन्टीजस्ता का’रोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था मि’लाउन, न्यूनतम शा’खा खोली न्यून्तम कर्मचारीबाट सेवा प्र’भाव गर्न बैंकहरुलाई भनेको थियो। त्यस्तै आफ्नो बैंकको सेवाबारे सम्पर्क व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्न भनेको थियो।
सोहीअनुसार नेपाल बैंकर्स सं’घले पनि वाणिज्य बैंकले आफ्नो शाखाहरुमध्येको काठमाडौंमा पाँचवटा, भक्तपुरमा १ वटा र ललितपुरमा २ वटा गरी आठ शाखा सञ्चालन गर्ने नि’र्णय गरेको थियो। तर कार्यालय हिँ’डेका कर्मचारी नै अ’वरोधमा परेपछि शाखा ब’न्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको समन्वयपछि अब भने शाखाहरु खुल्ने भएका छन्।